Momba anay - Zhenjiang Kingway Optical Co., Ltd.
1.56 Fijery sary tokana
1,56 Photogray Blut Block Lensa
Matoky izahay fa ny kalitao sy ny kalitaon'ny serivisy dia afaka mampitombo ny sandan'ny vokatra.
Zhenjiang Kingway Optical Company dia solomaso optika matihanina sy fanamboarana rafitra, izay natsangana tamin'ny taona 2011 tany Sina. Ity orinasa ity dia nanaiky ny fenitra ISO9001: 2000 sy ny fanamarinana voasoratra anarana. Nandritra ny traikefa sy ezaka nandritra ny taona maro, dia mankafy ny lazan'ny eo amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena isika.
Ny Zhenjiang Kingway Optical Company dia namboarina tamin'ny famokarana solomaso CR39,1.56,1.61index, ny mason-tsivana avo lenta miisa 1,67 ary ny masom-bifocal, ny lantira mandroso ary ny lantiro polycarbonate. Ny orinasa koa dia namorona andian-tsary 1.56 sy 1.61 photochromic, toy ny fahitana tokana, fahitana bifocal, flat-top, top-top, blend-top, progressive (lava & fohy) sy maro hafa. Ny lens rehetra dia azo vokarina amin'ny vita sy semi-vita.
Ny orinasa koa dia manohana ny masolavitra RX, vokatra malaza vaovao amin'ny indostrian'ny optique noho ny filàna lehibe ho an'ny endrika namboarina. Izahay koa dia mamokatra solomaso achromatopsia (fahajamban'ny loko) ary masom-piarovan'ny mpamily.
Ny solomaso sy ny zana-kaosinay dia amidy eran'izao tontolo izao ary manana ny lazany eo amin'ny tsena ivelany rehetra.
Nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona 2020, ny sandan'ny importa sy ny fanondranana solomaso Danyang dia 208 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 2,26% isan-taona, mitentina 14,23% ny sandan'ny import sy export an'i Danyang. Anisan'ireo ...